Resadresaka Niarahana Tamin’i Rebecca MacKinnon Momba ny Boky Nosoratany ‘Consent Of The Networked’ · Global Voices teny Malagasy
Resadresaka Niarahana Tamin'i Rebecca MacKinnon Momba ny Boky Nosoratany ‘Consent Of The Networked’	Voadika ny 08 Novambra 2012 4:24 GMT
Zarao: Rebecca MacKinnon, mpiara-manorina ny Global Voices, mpanao gazety sy bilaogera manana traikefa nandritra ny taona maro, be hevitra maranitra raha ny lohahevitra tena iantsorohany no jerena, izay amin'ny ankapobeny mikasika ny fahalalahan'ny fiaraha-monina sy ny fahalalahana ao amin'ny aterineto. Tamin'ny Janoary lasa teo, namoaka boky mitondra ny lohateny hoe Consent of the Networked (Fankatoavan'ny mpiserasera) izy, nandinihany lalina izany lohahevitra izany. Ho fanamarihana ny famoahana izany boky izany, nanoratra ilay mpiara-miasa ao amin'ny Global Voices, Bernardo Parrella:
Ahoana no ahazoantsika antoka fa handroso amin'ny fomba mifanaraka amin'ny demokrasia ny aterineto? Manoloana ny ezaka lehibe ataon'ny fampahalalam-baovao nandritra ny fitroarana farany teo tao Afovoany Atsinanana sy ny renim-paritra hafa manerantany, ahoana no ahazoana antoka fa tsy ho ampiasan'ny governemanta amin'ny sivana sy ny fanaraha-maso ny fitaovana tahaka izany (izay matetika mahazo fanampiana kely avy amin'ny teknolojian'orinasa Tandrefana)? Ary farany, ahoana no fomba hanajonana ny fiheverana fa toy ny “mpampiasa” teknolojia mandalo fotsiny isika fa tsy “mpiserasera” izay tompony sy tompon'andraikitra amin'ny hoavintsika eo amin'ny sehatra nomerika?
Tamin'ny teny Espaniola no namoahan'ny Editorial Deusto [es] ny boky tamin'ny volana jiona lasa teo, izay mitondra ny lohateny hoe No sin nuestro consentimiento (Tsy ekena raha tsy misy ny fankatoavantsika) [es]. Ahitana lahatsoratra fanampiny avy amin'ny “tò teny” anankiroa amin'ny aterineto Hispanika ny famoahana izany tamin'ny teny Espaniola: José Luis Orihuela no nanoratra ny sasinteny, ary i Enrique Dans kosa no nanoratra ny fehin-kevitra (epilôgy). Nibilaogy momba izany i Orihuela ary namoaka ny sasinteny tao amin'ny aterineto, izay ahitana [es] toy izao :
Ny lohahevitra lehibe resahin'i MacKinnon amin'ny boky dia tsy miresaka afa-tsy ny fitantanana ny aterineto ihany, sy ny tokony hitakiana amin'ny maha-olompirenena nomerika, fa tsy tokony hotanterahina ny fanapaha-kevitry ny mpanao politika sy avy amin'ny orinasa raha tsy efa misy ny fanekentsika rehefa nisy ny fampahafantarana.
Hadihadiana amin'ny antsipirihany sy amin'ny halaliny ao amin'ny “Consent Of The Networked” ny fomba fanaon'ny orinasa sy ny fanaraha-mason'ny governemanta manao izay anapahana ny sehatra nomerikan'ny fiarahamonim-pirenena, hita ao ihany koa ny fanisana ny fandrindrana ny asa fisantaran'andraikitra manokatra lalana ho fanitarana ny fanànana iraisana nomerika manoloana ny fandrosoan'ny fandraharahana ara-teknolojia sy ny hetahetan'ny governemanta hanara-maso.
Nanao tahaka izany ihany koa i Enrique Dans ary anisan'izany ny fanehoan-keviny tao amin'ny fehin-kevitra izay nosoratany, afaka hazavaina tsara ity teboka manaraka [es] ity:
Ny tian'ity boky ity atao, dia ny hanaitra amin'ny fahafantarana, raha tsy misy ny fiovan-javatra, amin'ny tsy maintsy iresahatsika amin'ny zanatsika, milaza ny aterineto ho toy ny nofinofim-pahalalahana izay niainana nandritra ny taom-polo vitsy, saingy lasa niafara ho zavatra hafa avy eo. Mbola tsy nisy fotoana teo amin'ny tantaran'olombelona, nahatsapantsika miharihary ny fanodikodinan-doha nataon'ny fahefana izay, miafin'endrika ambadiky ny zavatra nolazaina ho demokrasia, fa mandany fotoana manodikodin-dohan'olona amin'ny alalan'ny fampiasana fampahalalam-baovao mandeha lala-tokana, ny fifandraisana [kabary tsy valiana] ary ny teknikam-panasana atidoha ny vahoaka. Ny ataon'ny boky, dia ny hampiseho antsika, izay tsy maintsy hitranga rehefa miaraka amin'ny fahefana hita maso, fa tsy maintsy ferana ny herin'ny tontolo nomerika, lanjalanjaina, ary arahin'ny mpiserasera maso ihany koa.
Niresaka fohy tamin'i Rebecca mikasika ny bokiny aho nandritra ny Vovonana Global Voices tao Nairobi, Kenya:
Angamba tsy manerana ny fivarotam-boky rehetra ao Amerika Latina ny fivarotana azy, saingy mijanona ho boky tsara hovakiana. Efa misy amin'ny teny Espaniola sy Anglisy ny dika ao amin'ny aterineto.
lahatsoratra [es] fototra nivoaka tao amin'ny blaogy Globalizado.
Tantaran'ny Mediam-bahoaka farany 8 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaGV Face: Ahoana ny hanokafan'ny mpanampy antsitrapo ao Eoropa ny fony sy ny tranony ho an'ny mpitsoaponenana
12 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaSyriana mpitsoaponenana ao Torkia aho, saingy nanapakevitra ny hody an-tanindrazana
18 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaNibodo Ny Minisiteran'ny Tontolo Iainana Ireo Mpikatroka Libaney “Maimbo Ianareo”
Vakio amin'ny teny English, Português, English, Français, Español